Burmese taste - Iora: ပြတင်းသစ်များ
Posted by Iora at 10:11 PM
မိုးငွေ့........ May 26, 2013 at 11:36 PM
သစ်ပင်ကြီးကြီးတွေနဲ့ ပန်းပင်တွေနဲ့ ကျေးငှက်သံတွေကြားနေရတာ ရှုခင်းက လွမ်းမောဖွယ် ... စာရေးလို့သိပ်ကောင်းမယ့်နေရာလေး...။ welcome back Iora.. ပို့စ်အသစ်တွေ ဟင်းအသစ်လေးတွေ မျှော်နေမယ်..။
Welcome back Iora!
So lucky to live with the beauty of nature...
Love basin window idea, too :-)))
Now, I also have problem in using MMR font in comment box :-)
Iora May 27, 2013 at 8:11 AM
မြန်မာဖေါင့်ဆက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်..ဓါတ်ပုံတွေလည်း ထရန်စဖာလုပ်ရတာဆက်အဆင်ပြေမယ်..အချိန်လေးလည်းရမယ်ဆုိုရင်တော့ပို့ စ်တွေတင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်..တကယ်တွေးလို့ ရေးလို့ ကောင်းတဲ့နေရာလေး..မိုးငွေ့ သာဆုိုစာတွေအများကြီးရေးဖြစ်မှာ။း)
I wanna live this kind of place with no stress forever.
Sink window idea is one of my dream. I also want to haveareading/library room with glass wall facing to the huge plain with wildflowers and some scatter trees hosting the birds. And two rocky chairs for us and lots of books....
Oh..no it is so bad that havingafont problem. I hate it.
မီးမီးငယ် May 27, 2013 at 2:42 PM
နောက်တော့ ပြောင်းရွှေ့ နင်းကီး သိုင်းကနေရတာကိုး ;)...။
ပစ္စည်းတွေချပြီး နောက် ၃/ ၄ ရက်ကြရင် ပြန်နေရာရွှေ့ ၊
ဟိုဟာပြန်ရှာ၊ လိုချင်ရင် ဘယ်ပုံးထဲထဲ့မိမှန်းမသိ..။
ကိုယ်တို့ နဲ့ ကောနီးဘူးလား...။
နီးရင် လာလည်ချင်လိုက်တာ..အဲလေ..လာပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်တာပါ :P
ကုိုယ်ကပစ္စည်းတွေထဲ့တုန်းက ဘယ်ပုံးမှာဘာဆုိုပြီးစာရင်းတုို့ ထားတယ်။ အသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။
မီးမီးတို့ နဲ့ နီးဘူး။ တောင်နဲ့ မြောက်ဘဲ။
အိမ်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပြီးချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးဧည့်ခံချင်ပါတယ်။ ကျူတီလေးပြောသလို ဘလော့ဂါအားလုံးဆုံတဲ့တစ်နေ့ လေ။ ဟား ဟား..း)
သက်ဝေ May 27, 2013 at 6:02 PM
စားစရာတွေကို မျက်စိရှပ်ကြည့်ပြီး ပြူတင်းပေါက်တွေ သစ်ပင်တွေကို အကြာကြီး ကြည့်သွားတယ်... သာယာလိုက်တာ... စိတ်ချမ်းသာဖွယ် အတိပါပဲ...း-)
San Htun May 27, 2013 at 8:12 PM
ပြတင်းပေါက်ကလေးနေ သဘာဝလောကအလှတွေကို မြင်ရတာ သာယာလှပါဘိ...တကယ်သာယာတယ့် နေရာလေး...Welcome back sis !
စူးနှယျလေး May 28, 2013 at 3:50 AM
ဲပြူတင်းပေါက်ကလေးတွေ လာကြည့်သွားပါတယ်။ စားစရာကတော့ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ ပဲပြုတ်လုပ်တတ်တာ သိပ်အားကျတာပဲ။ တို့မလုပ်တတ်ဘူး။ တခါလုပ်ဖူးတာ မရလို့ထပ်လည်း မလုပ်တော့ဘူးလေ။ :D
Iora May 28, 2013 at 7:57 PM
သစ်ပင်တွေကိုမြင်ရတာတကယ်စိတ်ချမ်းသာဖုို့ ကောင်းတယ်နော်။း)
အဲဒီသစ်ပင်တွေကိုကြည့်မိရင်လေထိုင်နေရာကနေလုံးဝမထပဲဆက်ဘဲကြည့်နေချင်တော့တာ။ တုိုင်းကျူးတုိုင်းကျူး စန်းထွန်းလေးရေ။း)
ပဲပြုတ်ကုိုယ်စလုပ်တုန်းကလည်းမနပ်လို့ ပင်ပန်းလိုက်တာ။ သိတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်တဲ့နေရာဆိုဇွဲကောင်းတော့ပဲကုိုမကြိုက်လှပါပဲနဲ့ ထပ်လုပ်ရာကနေအဆင်ပြေသွားတာ။း)
Evy May 29, 2013 at 12:33 AM
ပြတင်းပေါက်တွေကို သဘောကျလိုက်တာ။ နေချင်စရာနေရာလေး။ အဲလိုမျိုးအပင်တွေ ပတ်လည်ဝိုင်းပြီးနေချင်တယ်
မြသွေးနီ May 30, 2013 at 3:50 AM
ပြူတင်းပေါက်ကနေ ရှုခင်းလှလှလေးတွေ ကြည့်ရတာ အင်မတန်မှ စိတ်ကြည်လင်စေတယ်နော်။ ဓာတ်ပုံလေးတွေအရမ်းကောင်းတယ်။ တကယ်လှတဲ့ရှုခင်းတွေ...။ စားစရာတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ပေးထားတော့ သွားရည်များတောင် ကျချင်လာရပါတယ်။
Iora May 30, 2013 at 5:26 PM
အချိန်အားများများလိုချင်တာအဲဒီပြတင်းပေါက်တွေကနေဟုိုငေးဒီငေးဘာမှမလုပ်ပဲကိုကော်ဖီခွက်ကြီးကြီးနဲ့ လက်ဖက်သုပ်လေးစားရင်းငေးချင်တာငေးတွေးချင်တာတွေးချင်တာ။ စနေတနင်္ဂနွေဟာဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူး။ ဟာရီကိန်းလာရင်တော့ဒီအပင်ကြီးတွေကိုဘဲကြောက်နေရအုန်းမှာ Evy ရေ။း)
အဲဒါတော့တကယ်ဘဲ။ ရှုခင်းလှလှလေးတွေမြင်နေရတာနဲ့ တင်စိတ်ကကြည်နူးလာရတယ်။
ဓါတ်ပုံလေးတွေကောင်းတယ်ဆုိုလုို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်တော့သံစကာတွေမှန်တွေခံနေတော့ ၀ါးတားတားနဲ့ မုို့ အားနာနေတာ။ ဒါပေမဲ့ကုိုယ်လည်းအဲလိုဘဲအိမ်ထဲကနေမြင်ရတာကိုခံစားစေချင်လို့ အဲလိုဘဲရုိုက်ထားတာပါ။
မမအိုင်အိုရာ ပျောက်နေလိုက်တာ အကြာကြီးနော် သတိရနေပါတယ်..
ပြတင်းပေါက်လေးကနေ ဟိုတွေးဒီငေး အရသာကို ကြိူက်တယ်. ကြည်နူးစရာ ရှုခင်းလေး.
ကော်ဖီသောက်ရင်း ကြည့်လိုက်မိတော့ ဆီထမင်းကို စားချင်လိုက်တာ အမရယ်..း)
ဟုတ်တယ်။ စိတ်မအားလူမအားနဲ့ ကွန်ပြူတာကလည်းဒုက္ခပေးနေတာနဲ့ လေ..
ပိုစ့်နဲ့ ဓတ်ပုံကြည့်ပြီး စိတ်ချမ်းသာလိုက်ရတာ၊
တောအုပ်ကြီးထဲမှာ ဆိုတာကိုက သိပ်သဘောကျစရာပါ။
အိမ်ကတောအုပ်ကြီးသက်သက်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ယာဝန်းထဲမှာ သစ်ပင်အုပ်တွေကို အပြောင်မရှင်းဘဲ လုိုတဲ့နေရာဘဲရှင်းဆောက်တဲ့စနစ်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်က သိပ်သာယာနေတာ။ ကုိုယ်တုို့ နုိုင်ငံမှာဆုို တခုခုဆောက်တော့မယ်ဆုို မြေတွေထုိုးပြီး အရင်ညှိပစ်လိုက်တယ်လေ။ ဒီမှာက နေရာတုိုင်းမှာ သဘာ၀၀န်းကျင်ကို တတ်နုိုင်သရွေ့ ချန်ထားတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကစိမ်းစုိုနေတာ။
ကျမလဲ ပန်းကန်ဆေးရင် ရှေ.မှာနံရံကြီးဘဲမြင်နေရတာ စိတ်ညစ်တယ်။
အခုလို ပန်းကန်ဆေးဘေစင်ရှေ.မှာ ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုမြင်နေရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်။
နောက်ပြီး အပင်ကြီးတွေကလဲ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ တောထဲတောင်ထဲရောက်နေသလိုဘဲနော် ကောင်းလိုက်တာ
ကိုယ်လည်းတော်တော်ကိုညီးငွေ့ ခဲ့ဘူးလို့ အဲလိုအမြဲတောင့်တခဲ့မိတာ။
ဒီလိုလုပ်ပါလား။ နံရံမှာမှန်တပ်ထားပြီကုိုယ့်ပုံကိုယ်ပြန်ကြည့်ကြရင်မကောင်းဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ်တခြားပြတင်းကိုချိန်ထားရင်ကော။ (နောက်တာပါ)း)
လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ကွန်မန့် လေးချန်ခဲ့တော့ပုိုကျေးဇူးတင်ခင်မင်ရပါတယ်။
မမအိုင်အိုရာ သတိရလို့ လာလည်တာ.အလုပ်များနေလား အမ.
ဟင်းတွေ၊ မုန့်တွေ သားရည်ကျပြီး ပြန်သွားပါတယ်..း)
အိမ်နားနီးရင်အမြဲဝင်စားလုို့ တောင်ဖိတ်ချင်ပါတယ်။ တကယ်။
မမအိုင်အိုရာ။ (သုို့ )..တီတီအိုင်အုိုရာ
Tun Tun October 22, 2013 at 7:53 AM
အိမ်က တကယ်နေချင်စ၇ာပဲ ၇ူခင်းတွေ သိပ်လှမှာပဲနော်။ ဟင်းတွေကလဲ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။
Iora October 23, 2013 at 8:45 PM
ရှုခင်းလေးတွေတော်တော်လှတယ်။ အထူးသဖြင့်သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ လမ်းဘေးကအရုိုင်းပန်းလေးတွေပေါ့။